3 Waxyaabood Oo La Sameeyo Marka Xaaskaaga Ay Aad Kuugu Careysantahay - Aayaha
Home»XIRIIRKA IYO GUURKA»3 Waxyaabood Oo La Sameeyo Marka Xaaskaaga Ay Aad Kuugu Careysantahay
Dhib malahan si kasta oo aad u taxadar badantahay, mararka qaar waad sameyneysaa qaladaad dhaawaca xaaskaaga.
Ahaanshaha nin wanaagsan macnaheeda maahan inaadan waligaa ka careysiineyn xaaskaaga sababtoo ah waa qasab in mar uun ay dhacdo sababtoo ah bini aadam ayaa la yahay.
Waa kuwaan qaar kamid ah waxyaabaha aad sameyneyso si aad u dajiso xaaskaaga markay aad kuugu careysantahay.
Raalli gelin/ Cafis
Raalligelinta waa tallabada koowaad ee aad ku dajin karto xaaskaaga marka ay kuu careysantahay. Inaad dhahdo “Waanka xumahay” kama dhigno inaad tahay nin daciif ah ama liita ee waxay ka dhigantahay inaad tahay nin caaqil ah isla markaana qiimeeya guurkiisa.
Run ahaantii waa sheeyga la sameeyo gaar ahaan markaad qaldantahay. Qaadashada qaladkaaga waa waxa ugu wanaagsan ee aad markaas sameyn karto iyadoo raalli gelinta iyo inaad cafis weydiisato ay dajin doonto xaaskaaga.
Isku day inaad xaliso dhibka
Haddii dhibka la xalin karo kadib fadlan isku day inaad xaliso. Haddii aanan la xalin Karin qiro qaladkaaga oo u ballan qaad inaad mar kale sameyn doonin.
Waxa ugu xun ee aad sameyn karto waqtigaas ayaa ah inaad ka tagto ama aad ka aamusto.
Wax dheh, ha aamusin oo haka tagin iyadoo careysan illaamaa inay iyada ku dhahdo iga tag ma ahane.
Samee wax ay jeceshahay
Markay ku cafiso kadib, waxaad sameyn kartaa waxay jeceshahay sida, inaad laabta geliso ama aad hab siiso haddii ay jeceshahay, inaad guriga ku xambaarto ama aad u sameyso cunto ay jeceshahay ama aad u keento hadiyad.
U sameey waxay jeceshahay maadaama ay ku farxeyso markaad u sameyso.
careysantahay Caro Dajin Xaaskaaga